नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता दिलाएका अल्मुताईरिले किन गरे नेपाल छाड्ने घोषणा ?
दक्षिण एशियाकै सबै भन्दा ठुलो फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियसिपमा नेपाललाई अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक सफलता दिलाएका नेपालका प्रशिक्षक अब्लुल्लाह अल्मुताइरीले पद त्यागसंगै नेपाल नफर्किने घोषणा गरेका छन्। नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता दिलाए लगत्तैको प्रेसमिटमा अब्लुल्लाह अल्मुताइरीको यो घोषणाले नेपालका फुटबल प्रेमीलाई अचम्मित बनाएको छ। साफ च्याम्पियमशिप सुरु भएयताकै नेपालको ठुलो उपलब्धि हासिल गरे लगत्तै अब्लुल्लाह अल्मुताइरीले गरेको यो घोषणालाई धेरै अर्थपूर्ण मानिएको छ। अब्लुल्लाह अल्मुताइरीलेले भनेका छन्, 'अन्तिम तीन दिनमा मैले धेरै नराम्रो अनुभव गरेँ । ममाथि धेरै अरोप लाग्यो । हिजो हाम्रो ३ बजे ट्रेनिङ थियो । त्यसकारण सहायक प्रशिक्षक र अर्को एकजना खेलाडी प्री म्याच प्रेस कन्फ्रेन्समा आएका हुन् । एउटा मिडियाले त्यसैलाई समाचार बनायो र मजाक उडायो,’’ नेपालका प्रशिक्षक अल्मुताइरीले भने, ‘‘आफ्नो प्रशिक्षकलाई त सम्मान गर्नुपर्छ । हामी प्रशिक्षक हौँ । नोकर होइन । हामी परिवार हौँ । हामी मानव हौँ ।' उनले अगाडी भने, 'हाम्रो बच्चाहरू छन् । मैले त्यो मिडियालाई सोधेँ । म्याच फिक्सिङको अरोप लगाएर खुसी भयौ ? गर्व महशुस भयो ? म नोकर होइन । प्रशिक्षक हुँ । फुटबल विकासका लागि नेपाल आएको हुँ । मैले नेपालमा भएको पत्रकार सम्मेलन भनेको थिए । म इतिहास रच्न चाहन्छु । त्यो आज पूरा भएको छ । अब हामी शनिबार फाइनल खेल्नेछौँ । यो मेरो अन्तिम खेल हुनेछ । त्यो खेलपछि म कहिल्यै नेपाल फर्किने छैन ।'उनको यो घोषणाले नेपालको फुटबल उद्योगमा धेरै ठुला समस्याहरु भएको कुरालाई उजागर गरेको छ भने नेपालको फुटबललाई हेर्ने अन्तराष्ट्रिय दृष्टिकोणमा समेत ठुलो धक्का लागेको छ। बंगालदेशसँगको १-१ को बराबरी खेलेर नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको छ। साफ च्याम्पियनसिपमा यो नै नेपालको लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। आजको खेलमा नेपाल बिरुद्द ९ मिनेटमै लिएको अग्रता जोगाउन बंगलादेशले पूरै रक्षात्मक भएर खेल्यो। झण्डै सफल पनि भएको थियो । तर, अन्तमा भाग्यले नेपाललाई साथ दियो ।खेलको ८८ औं मिनेटमा नेपालले पेनाल्टी पाएपछि खेलको नतिजा मोडियो अञ्जन विष्टले मौका खेर फालेनन् । खेल बराबरीमा टुंगियो। र नेपाल ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्दै फाइनलमा पुगेको हो। बंगलादेशी खेलाडी रोएको दृष्यले नेपाली दर्शकलाई सन् १९९९ को साग फुटबलको फाइनलको याद ताजा गराएको छ । घरेलु मैदानमा भएको उक्त फाइनलमा नेपाल बंगलादेशसँग १-० ले हारेको थियो । खेलमा पूर्णनियन्त्रण कायम गरे पनि गोल गर्न चुक्दा नेपाल उपाधिबाट वञ्चित भएको थियो । नेपाली खेलाडीहरू यसरी नै मैदानमा रोएका थिए। बंगलादेशसँगको उक्त हारको बदला नेपालले आज लिएको छ ।
बाँके साक्षर घोषणा हुन बाँकी
बाँके अझै साक्षर जिल्ला घोषणा हुनसकेको छैन । कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाले मात्र साक्षरता घोषणा गरिसकेका छन् ।
काठमाडौँ महानगर साक्षर घोषणा
काठमाडौँ– काठमाडौँ महानरपालिका साक्षर महानगरपालिका घोषणा गरिएको छ । महानगरभित्रका कुल जनसंख्याको ९६.६ प्रतिशत साक्षर भएको हुँदा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार महानगर शिक्षा विभागले सोमबार साक्षर घोषणा गरिएको हो । बाग्मती प्रदेशका नगर महानगरहरु सबै घोषणा भइसकेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरमात्र साक्षर हुन घोषणा हुन बाँकी रहेको हुँदा महानगरलाई साक्षर घोषणा गरिएको महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद […]
सोमबार काठमाडौं महानगरपालिका–३० मा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘वडामा आयोजित कार्यक्रमबाट मैले महामन्त्री पदमा उठ्ने घोषणा गरेको छु। मेरै वडा र अग्रजहरूका बीचमा गौरवसाथ यो घोषणा गरेको हुँ।’...
कोरोना संक्रमण उच्च बढेपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। सोमबार स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने र अन्य विषयमा निर्णय गर्ने भनी कोभिड १९ संकट
बाँके पूर्णखोप जिल्ला घोषणा
बाँके जिल्लालाई पूर्णखोप जिल्ला घोषणा गरिएको छ । जिल्लाका आठवटै पालिकाका सम्पुर्ण बालबालिकाहरूले पूर्णखोप प्राप्त गरेको सुनिश्चितता भएपछि जिल्लालाई पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको घोषणा समारोहमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तवले बाँके जिल्ला पूर्णखोप जिल्ला भएको घोषणा गरेका हुन् । पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गर्दै संयोजक श्रीवास्वले खोप सुनिश्चितता […]
‘जिन्दाबाद’को घोषणा, निश्चलले निर्माण गर्ने
निर्देशक निश्चल बस्नेतले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा ‘जिन्दाबाद’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । जन्मदिन मनाउन पालुङ पुगेका उनले त्यसै क्रममा उक्त चलचित्र घोषणा गरेका हुन् । निश्चलले सामाजिक संजालबाट जन्मदिनको सेलिब्रेसनबारे जानकारी दिंदै नयाँ चलचित्रको घोषणा गरेका हुन् । तर, अहिलेसम्म यो चलचित्र कस्तो बिषयवस्तुमा केन्द्रित रहन्छ भन्ने खुलाइएको छैन । जन्मदिनको अवसरमा उनकी श्रीमती तथा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का पनि उपस्थित थिइन् । निश्चलले यो चलचित्र बनाउने चर्चा लामै समयदेखि चलेको भएपनि अहिलेसम्म यसको घोषणा भएको थिए...